မျိုးဆက်သစ်မှတ်တိုင်: November 2010
တန်ဆောင်တိုင်ဖူးစာ (၅-ခန်းရပ် စင်တင်ပြဇာတ်)
တန်ဆောင်တိုင်ဖူးစာ ပြဇာတ်တွင် တင်ဆက်ကပြကြသည့် ကာရိုက်တာလေးများ
မောင်ကဗေဒါ ရေလွှာကမင်း တစ်နေ့သောခါ ရွှေကြာကိုတွေ့ ဗေဒါလေးကို မေ့လိုက်ပါနဲ့ရေလွှာလေးရယ်..လို့ဖွင့်ဟခဲ့သူဗေဒါအဖြစ်မောင်အောင်နိုင်ထွေး
ဤနေ့ညကား ဆီးနှင်း၊မြူ၊တိမ်၊သူရိန်၊မီးခိုးဟူသောညစ်မျိုးငါးဝ ကင်းစင်သောညတစ်ညဖြစ်သည့်အလျှောက်
အထက်ဝေဟင် ကောင်းကင်ပြင်ကိုမော့၍ကြည့်ပါက အညစ်ကြေးငါးမျိုးစလုံး ကင်းစင်နေသဖြင့်အလွန်ပင် သာယာကြည်နူးဘွယ်ကောင်းလှချေ၏။ဤသို့သော ညချမ်းသမယမျိုး၌ အညာဒေသမှချင်းဆိုင် ရွာလေး၏
အလှကားဘယ်သူပြိုင်လို့ လှပါတော့နိုင်ဟု ဆိုရမလောက်ပင်၊ရွာကလေး၏ဘေးပတ်ပတ်လည်၌ တောင်တန်း
များက ၀န်းရံထားသဖြင့် မြတ်ဗုဒ္ဓလက်ထက်က တောင်ငါးလုံးကာခို ရာဇဂြိုလ်မြို့ပမာ သာယာကြည်နူးဘွယ်ကောင်းလှ၏၊၄င်းရွာလေးတွင်နေထိုင်လျှက်ရှိကြသည့် မစုဝတီတို့အိမ်သည်ကား ဤလိုတန်ဆောင်တိုင်လပြည့်ညရောက်တိုင်းဆေးပေါင်းခသည့်မယ်ဇလီဖူးများကိုတပျော်တပါးသုတ်စား
်ပုံရိပ်ကား ညီမတတွေ၏ရိုးသားမှုကို အစ်မကြီးစုဝတီကပါးစပ်ကတဖွဖွပြောကာဧည့်ခံနေစဉ်မှာရွာထဲမှ
စုဝတီ နွေဝတီ ရေ၀တီတို့အားဇာတ်ဝင်ခန်းတစ်ခု၌တွေ့ရစဉ်
၀င်လာကြသဖြင့်. ”.ဟေ့ ကောင်လေးတွေ အရက်မူးလာပြီး ဘာတွေအော်နေကြတာလဲ..ဒီမှာမှတ်ထား ကြစမ်း..တကယ်တော့နင်တို့သောက်တဲ့အရက်တွေဟာဆေးပေါင်းမခဘူးဟဲ့..အကြွေးပေါင်းခတာ.
.မှတ်ထားကြ…့ လူပျိုကြီးကိုလှအရက်ဆိုင်မှာလည်းနင်တို့နှစ်ယောက်သောက်ထားတဲ့အရက်အကြွေးစာရင်း ကလည်းဘောမှာပြည့်နေပြီ၊အခုလို တန်ဆောင်တိုင်ညမျိုးကြီးမှာ အရက်မူးတာ မကောင်းပါဘူးဟယ်”ဟု
့ ဖိုးတေနှင့်ဖိုးပေတို့ကား မနွေဝတီစကားဆုံးသည်နှင့်တပြိုင်နက် ဤသို့တောင်းဆိုလာကြရာ နဘေးရှိလူငယ်လေးများပင်မျက်လုံးပြူးသွားရမလောက်ဖြစ်ပေသည်၊”စောစောက မနွေဝတီပြောသွား တဲ့အထဲမှာတန်ဆောင်တိုင်ဆိုလားဘာဆိုလားကြားလိုက်ရတယ်ဗျ..အဲဒီတန်ဆောင်တိုင်အကြောင်းက
ိုစိတ်ဝင်စားလို့ နဲနဲပါးပါးလောက် ပြောပြပေးနိုင်မလားမနွေဝတီ”။အင်းလေ. မင်းတို့ စိတ်ဝင်စားတယ်ဆို
ရင်လဲ အစ်မသိသလောက်ပြောပြပေးပါ့မယ်ဟု မနွေဝတီက ပြန်ပြောလိုက်ပြီး သူမသိထားသော
တန်ဆောင် တိုင်အကြောင်းကို အောက်ပါအတိုင်းရှင်းပြလေတော့၏။“မြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်က
ဖခမည်းတော်ကိုသတ်ပြီး ဘုရင်လုပ်တဲ့ဘုရင်အဇာသတတ်ဆိုတာမင်းတို့လဲ ကြားဖူးကြမှာပါကွယ်…
သူဟာအဲဒီလိုဖခမည်းတော်ကို သတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ အကုသိုလ်ကံကြောင့် အခုလိုတန်ဆောင်တိုင်ညမျိုးမှာ
သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကို သံလျှက်ပေါင်းများစွာနဲ့ ထိုးနှက်သလို ခံစား ရပြီး တစ်ညလုံးတစ်မှေးမှ အိပ်မပျော်ခဲ့ဘူးတဲ့ကွယ်…
ထွက်လာခဲ့ပါတော့တယ်…အဲဒီလို နန်းတော်မုခ်ဦးကနေထွက်ရာမှာတောင်တွေက ကားရံထားသည့်အတွက်
မင်းတို့ငါတို့ ချင်းဆိုင်ရွာလို အလင်းရောင် ကောင်းကောင်းမရကြဘူးတဲ့ကွယ်…ဒီတော့ ဘုရင်ကို လိုက်ပို့ကြတဲ့
ဲ့မူးမတ်ဗိုလ်ပါတွေဟာ တိုင်ထိပ်တွေမှာ မီးရှူးတန်ဆောင်တွေ ထွန်းညှိကြပြီးလိုက်ပို့ခဲ့ကြတာပေါ့…… အဲဒီလို မီးရှူးတန်ဆောင်တွေထွန်းညှိကြပြီးလိုက်ပို့ကြတာကိုအတုလိုက်ပြီးယ္ခုလိုတန်ဆောင်တိုင်ဆိုတာဖြစ်ပေါ်
ဲကွယ်”မနွေဝတီစကားအဆုံးမှာတော့ အရက်သမားဖိုးတေက”အခုလို စုံစုံလင်ရှင်းပြပေးတဲ့အတွက်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မမနွေဝတီ..ကျွန်တော်တို့လဲ နောက်ဆိုရင် အခုလိုမမူးတော့ပါဘူးဗျာ.ကဲကဲကျွန်တော်တို့ပြန်လိုက်ပါဦးမယ်ဟုနှုတ်ဆက်ကာပြန်သွားကြလေရာ
မနွေဝတီပြောပြသော တန်ဆောင်တိုင်အကြောင်းကို စိတ်ဝင်တစားနားထောင်နေကြသော အခြားလူငယ်များကလည်းအသီးသီးနှုတ်ဆက်ကြကာပြန်သွားကြချေပြီ၊ထိုအထဲတွင်ဗေဒါနှင့်ရွှေကြာဆို
ိုအပြိုင်ပိုးနေကြသဖြင့်ပြန်ဘို့ရန်မေ့နေကြသယောင်ပင်။အစ်မကြီးစုဝတီက. .ဟဲ့..နင်တို့နှစ်ကောင်ကရောမပြန်ကြသေးဘူးလားဟုပြောလိုက်တော့မှရှက်ကိုးရှက်ကန်းဖြစ်ပြီး..အဲ..အဲ. .ကျွန်တော်တို့လည်းပြန်လိုက်ပါဦးမယ်ဟုနှုတ်ဆက်ပြီးအိမ်ရှေ့ကွပ်ပျစ်ပေါ်မှအဆင်းမျက်လုံးတွေက
ရေ၀တီဆီ ရောက်နေကြသဖြင့်ကွပ်ပျစ်အစွန်ဖျားကိုတက်နင်းမိပြီးနှစ်ယောက်သားကွပ်ပျစ် ဘေးတွင်မှောက်ရက်လဲခဲ့ကြသည့်မြင်ကွင်းကားညီမသုံးယောက်အတွက်မမေ့နိုင်စရာအဖြစ်အပျက်လေး
ဤနေ့ကား တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ကျော်(၁)ရက်နေ့ဖြစ်ချေ၏၊တန်ဆောင်တိုင်ပွဲပြီးဆုံးသွားသော်လည်း ရွာလည်ကကိုဗေဒါတစ်ယောက်အတွက်တော့တန်ဆောင်တိုင်ညကအစပျိုးခဲ့သောအချစ်ဇာတ်လမ်းအတွက် ခရီးဆက်ဘို့ရန်ရေ၀တီတစ်ယောက် ရွာဦးဘုန်းကြီးကျောင်းသို့ ဆွမ်းပို့အလာကို လမ်းဒေါင့်တစ်နေရာမှ စောင့်ကြိုပြီးအချစ်ရေးဆိုဘို့ရန်အားခဲနေသည်မှာမြင်ရသူတွေအတွက်သနားစရာကောင်းလှပေသည်၊
်ဘုန်းကြီးကျောင်းမှ ဆွမ်းပို့ပြန်လာခဲ့ချေပြီ၊လမ်းဒေါင့်အရောက်မှာတော့ ကိုဗေဒါက ရေ၀တီရှေ့မှရပ်လျှက်
ရေ၀တီ ဆွမ်းပို့ပြန်လာပြီပေါ့လေ..ဟုတ်တယ်..ဒါနဲ့ ကိုဗေဒါ ဒီနားလာပြီးဘယ်သူ့ကို စောင့်နေတာလဲဟင်ဟု”ရေ၀တီကမေးလိုက်ရာရှက်ကိုးရှက်ကန်းဖြင့်”ဟာဗျာဘာရယ်ဟုတ်ပါဘူး. .မနေ့ညကဒီဘေးမှာလက်ပတနာရီပြုတ်ကျခဲ့လို့လာရှာတာပါဗျာ..ဟဲ.ဟဲ.”။ကိုဗေဒါကလက်ပတ်နာရီ
ရှာနေတယ်လို့တာပြောတယ် လက်မှာလဲ နာရီကြီးနဲ့ပါလားဟု ရေ၀တီကပြောလိုက်တော့မှ ဗေဒါက..
အင်းဟုတ်တယ်ရေ၀တီရယ်.. အမှန်တိုင်းပြောရရင် ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာလာတဲ့ကိစ္စက တန်ဆောင်တိုင်
်လပြည့်ညတုန်းက တွေ့ခဲ့ရတဲ့ ကျွန်တော်ဘ၀ရဲ့ဖူးစာရှင်မလေးတစ်ယောက်ကို လာစောင့်နေတာဗျ…
ဟုပြန်ဖြေလိုက်ရာ ရေ၀တီက ”အင်း အင်း ပြောပါဦး ဖူးစာရှင်မလေးကဘယ်သူလဲ ရွာလည်ကလား၊
ရွာတောင်ပိုင်းကလား”စသည်ဖြင့် မသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီးမေးနေသည်ကလည်း မိန်းမတို့သဘာဝမို့
ို့အပြစ်မဆိုသာပေ။ဒီတော့မှ ကိုဗေဒါက ကျွန်တော့်ဘ၀ရဲ့ဖူးစာရှင်မလေးဆိုတာက အခုရှေ့မှာရောက်နေတဲ့
ရေ၀တီလေလို့ပြောလိုက်တော့မှ ”ရှင်”ဟု ရင်ဘတ်လေးကိုဖိပြီး ရှက်သွေးဖြာလျှက်လာရာလမ်းအတိုင်း
လှည့်ပြန်သွားလေ၏။ ဤနေ့ကား ကိုဗေဒါအတွက်ရေ၀တီဆီမှမေတ္တာကိုရလိုက်သဖြင့်ပျော်မဆုံးမော်မဆုံး
ဤနေ့မှာပင် ဗေဒါကဲ့သို့ ရေ၀တီအပေါ်မေတ္တာသက်ဝင်နေသောရွှေကြာတစ်ယောက်လည်းချင်းဆိုင်ရွာကို ကွမ်းသီးရောင်းဝယ်ရေးကိစ္စတစ်ခုနဲ့လာရင်းရေ၀တီတို့အိမ်သို့ရောက်လာကာအစ်မကြီးစုဝတီကိုသူ့ရင်ထဲက ရှိတဲ့အတိုင်းဤသို့ပြောပြလေ၏၊”အစ်မကြီးတော့အမိအရာဆိုတဲ့အတိုင်းဘဲကျွန်တော်အစ်မကြီးကိုပြောပြမယ်
်နော်. .တကယ်တော့အစ်မတို့ညီမတတွေဟာစီးပွားရေးချို့တဲ့ကြပေမယ့် စိတ်ဓာတ်ကတော့ မွန်မြတ်ကြတယ်ဆိုတာလူတိုင်းအသိဘဲဗျာ၊ဒါပေသည့် စီးပွားရေးအခြေနေကြောင့် တက္ကသိုလ်ဆက် မတက်နိုင်ရှာတဲ့မစုဝတီတို့ရဲ့ညီမလေးရေ၀တီကို မကြည့်ရက်ဘူးဗျာ..အစ်မတို့အနေနဲ့ ခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်ညီမလေးရေ၀တီကိုတက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရတဲ့အထိတာဝန်ယူသွားပါရစေလား..ရွှေကြာအတွက်
်တော့ ငွေရေးကြေးရေးကမိုင်နာ(minor)ပါဘဲဗျာ”ဟုရွှေကြာစကားအဆုံးမှာတော့နွေဝတီက”အင်း..မင်းပြော တော့လဲအဟုတ်သား..ဒါပေမယ့်ညီမလေးသဘောထားကဘယ်လိုမှန်းမသိသေးတော့ညီမလေးကိုလည်း
မေးကြည့်ချင်သေးတယ်ဟု စကားကိုတစ်ဝက်ချန်ထားလေ၏..သြော်.ရပါတယ်ဗျာ..ရပါတယ်..ဒါနဲ့စကားမစပ် ရေ၀တီကောမတွေ့ပါလားဗျ..ဘယ်သွားနေလဲဟုမေးလိုက်ရာ နွေဝတီက“ညီမလေးကဘုန်းကြီးကျောင်းကို ဆွမ်းပို့သွားနေတာ..မကြာခင်ပြန်လာတော့မှာပါ..ကိုရွှေကြာအချိန်ရရင်စောင့်ဦးလေ”ဟုအားနာသော လေသံဖြင့့််
ဖိတ်မံနေသေး၏။ အမှန်ကားရေ၀တီသည် ဆွမ်းပို့ကပြန်ရောက်တာကြာပြီဖြစ်သော်လည်း ကိုရွှေကြာအိမ်ရောက်
နေမှန်းသိသဖြင့် အိမ်ရှေ့တံခါးဝအတိုင်းမ၀င်ဘဲနောက်ဖေးတံခါး ကနေတိတ်တိတ်ပုန်းဝင်ပြီးအစ်မကြီးနှင့်ရွှေကြာတို့
ပြောစကားများကို နားထောင်နေ၏။မကြာမှီမှာဘဲ ကိုရွှေကြာအိမ်ကနေပြန်သွားတော့မှအိမ်ထဲသို့ဝင်လာခဲ့လေသည်။(ကားလိပ်ချ)
အိမ်ထဲတွင် တံမြက်စည်းလှဲနေသာ အစ်မလတ်နွေဝတီက ညီမလေး ရေ၀တီကိုမြင်မြင်ချင်း”ဟဲ့..ညီမလေး တောင် ဆွမ်းပို့ကပြန်လာပြီပဲ..ဒီနေ့နောက်ကျလှချည်လား.ညီမလေးရယ်ဟုပြောနေစဉ်မှာပင်အစ်မကြီးက မီးဖိုချောင်တွင်းမှ
ှထွက်လာပြီှး ”အော် ညီမလေးပြန်လာတာနဲ့ အတော်ဘဲ..ပြောစရာရှိလို့..ညီမလေး.
စောစောက မောင်ရွှေကြာတစ်ယောက် အိမ်ကိုလာသွားတယ်လေ..ညီမလေးကို တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရတဲ့အထိ သူတာဝန်ယူပါရစေလို့ ပြောသွားတယ်..အဲဒီတော့ ညီမလေးသဘောကရော ဘယ်လိုလဲဟင်”ဟုမေး လိုက်သည်နှင့်
ကြီးရယ်. .ပြီးတော့ ညီမမှာလဲဘ၀အတွက်လက်တွဲဖော်ဖူးစာရှင်တစ်ယောက်ရှိနေပြီလေ”ဟုပြန်ပြော
်တော့မှ ရေ၀တီက”ညီမရဲ့ဖူးစာရှင်က တခြားတော့မဟုတ်ဘူး..ရွာလည်က ကိုဗေဒါဘဲပေါ့အစ်မကြီးရယ်”ဟု
ုပြော လိုက်ရာ…အင်းလေ..ဒါဆိုလဲ ညီမသဘောအတိုင်းဘဲလေဟုပြောပြလိုက်လေ၏။ (ကားလိပ်ချ)
ဒီကနေ့တော့ တိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခုလို့ဘဲ ပြောရမလားမသိ၊ဗေဒါနှင့်ရွှေကြာတို့နှစ်ယောက်စလုံး ရွာလည်လမ်းဒေါင့်
တစ်နေရာတည်းမှာပင် ရေ၀တီဘုန်းကြီးကျောင်းမှဆွမ်းပို့ပြန်အလာကို စောင့်နေကြ လေ၏၊ရေ၀တီဆီမှမျှော်လင့်ချက်ရထားသောကိုဗေဒါကလည်း၎င်းမျှော်လင့်ချက်ကိုပိုပြီးခိုင်မာအောင်ကြိုး စားဘို့ရန်အတွက်လာပြီးစောင့်နေသလိုရေ၀တီရဲ့ငြင်းပယ်မှုကိုခံထားရသောကိုရွှေကြာကလည်းမလျှော့ သောဇွဲဖြင့်ရေ၀တီဆီကမေတ္တာကိုငွေအားကိုးနှင့်ရယူဘို့ရန်အတွက်လာပြီးစောင့်နေကြသည့်မြင်ကွင်းကား အင်မတန်ပင်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာကောင်းလှချေ၏။မှန်ပါသည် ကိုဗေဒါဟာပစ္စည်းဥစ္စာမချမ်းသာသော်လည်း ရိုးသားတည်ငြိမ်ရင့်ကျက်သောယောက်င်္ကျားတစ်ယောက်ဖြစ်သဖြင့်ရွာထဲရှိမိန်းခလေးရှင်မိဘတိုင်းကလိုလို သမက်တော်ချင်နေကြ၏။ကိုရွှေကြာကလည်းငွေကြေးဥစ္စာပြည့်စုံသောယောင်္ကျားတစ်ယောက်ဖြစ်သည့်အား လျှော်စွာအမြဲတမ်း်းလိုလိုပါးစပ်မှာစီးကရက်ခဲလျှက်ပင်ရောင်းဝယ်ရေးအလုပ်ကိုလုပ်ကိုင်နေသူဖြစ်ရာရွာထဲရှိ လုံမပျိုမေလေးများအတွက်မက်သော်လည်းမက်လောက်ချင်စရာပင်။ခက်တာက ရွှေကြာကလည်းပစ္စည်း ဥစ္စာကြွယ်ဝမှုကိုအထင်မကြီးဘဲရိုးသားတည်ငြိမ်မှုကိုသာတန်ဖိုးထားတတ်သောမစုဝတီတို့ရဲ့ညီမငယ် ရေ၀တီလေးကိုမှမေတ္တာသက်ဝင်ချစ်ခင်နေခြင်းပင်တည်း။မကြာမှီပင်ရေ၀တီတစ်ယောက်ဘုန်းကြီးကျောင်းမှ
ဆွမ်းပို့ပြန်လာနေပြီဖြစ်ရာ ကျော့ကွင်းထောင်ပြီးသမင်အလာကိုစောင့်မျှော်နေကြသောမုဆိုးများပမာ ဗေဒါတို့
့နှစ်ယောက်သားလည်း ရေ၀တီလေးကိုအပိုင်ဖမ်းဘို့အတွက်လည်ပင်းတရှည်ရှည်နှင့်စောင့်မျှော် နေကြရာ အခုတော့အနီးကပ်ဆုံးအချိန်ကိုရောက်ရှိလာပြီဖြစ်သဖြင့် ကိုဗေဒါက အနီးရှိရွှေကြာကို ဤသို့လှမ်းပြောလိုက်၏”ဟိုမှာရေ၀တီလာနေပြီဗျ..ဒီနေရာမှာကိုရွှေကြာက ကျွန်တော့ထက်အသက်ကြီးတာ
ဆိုတော့ ကိုရွှေကြာဘဲရေ၀တီကိုအရင်သွားပြောလိုက်ပါ..ကျွန်တော်ဒီဘေးကနေစောင့်နေပါ့မယ်ဗျာ” ဟုပြောသဖြင့်ရွှေကြာလည်းဒီတစ်ချီတော့ရေ၀တီကိုအပိုင်ဖမ်းတော့မည့်အကြံနှင့်..”ဒီမှာညီမလေးရေ၀တီ.. ရေဆိုတာကြာရှိနေမှတင့်တယ်ဆိုတဲ့လောကနီတိစကားကိုမင်းလည်းကြားဖူးမှာပါ..အခုလည်းပဲ မင်းက ရေ
.ဗေဒါဆိုတဲ့ ငမွဲငခြောက်ကောင်ကို ဘေးဖယ်ထားလိုက်စမ်းပါ..ရေ၀တီရယ် ”ဟုခပ်မာမာလေသံ ဖြင့်ပြောပြလိုက်ရာအနီးအနားတွင်ရှိနေသာ ကိုဗေဒါက”အေးဟုတ်တယ် မင်းလိုစီးပွားရှိတဲ့ကောင်က
ပြောတော့လည်း ငါ ခံရမှာပေါ့လေ..ရပါတယ်ဗျာ ရပါတယ် ဟု ခပ်အေးအေးပင် ပြန်ပြောလိုက်လေဧ။်
ပြော တော့လည်း ငါခံရမှာပေါ့..ဒါပေမယ့်မန်းနီးပါဝါ(money power)ဆိုတဲ့အရာနဲ့ နေရာတကာမှာ အနိုင်ယူလို့မရနိုင်ဘူးဆိုတာကိုတော့ မင်းမှတ်ထားလိုက်ပါဟုပြန်လည်ချေပလိုက်၏။ တန်ဆောင်တိုင်ကပွဲကိုအားပေးနေသောပရိသတ်မြင်ကွင်း
တကယ်တော့ ကိုဗေဒါတစ်ယောက် ရေ၀တီရဲ့အချစ်ကိုယုံကြည့်၍သာရွှေကြာကိုရေ၀တီနှင့် အရင်ပေးတွေ့လိုက်ခြင်းပင်၊ရွှေကြာကိုရေ၀တီကစိတ်မ၀င်ဘူးဆိုတာကို အစောကတည်းက သိထားနှင့်ပြီးလေပြီ။ကိုဗေဒါစကားအဆုံးမှာတော့ရေ၀တီကလည်းရွှေကြာကိုမျက်နှာချင်း ဆိုင်ကာ”ဒီမှာ.ရေဆိုတာကြာရှိမှတင့်တယ်တယ်ဆိုတာလက်ခံပါတယ်.ဒီစကားဟာ စာထဲမှာဘဲရှိတော့တာ..ရေပေါ်မှာရှင်သန်နေကြတဲ့ဗေဒါတွေဟာ ကြာတွေလောက်မလှမပကြပေမယ့် တည်ငြိမ်တယ်၊ရင့်ကျက်တယ်လေ.ပြီးတော့ ကြာတွေလိုရေပေါ်မှာထောင်တောင်တောင် မြောက်ကြွကြွ
မလုပ်တတ်ကြဘူး..ဒီတော့ ရှင်သိအောင် ပြောပြလိုက်မယ်နော်..ရေ၀တီရဲ့ဖူးစာရှင်အစစ်အမှန်ဟာ ဟို
ဘေးနားမှာ ရပ်နေတဲ့ ကိုဗေဒါလေ.”.။ရေ၀တီစကားအဆုံးမှာတော့ ဗေဒါတစ်ယောက် ရေ၀တီဆီအမြန်ပြေးလာပြီး ” ၀မ်းသာလိုက်တာညီမလေးရယ်.ကိုယ်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဖူးစာဟာတန်ဆောင် တိုင်လပြည့်ညမှာဆုံခဲ့ကြတာမို့တန်ဆောင်တိုင်ဖူးစာဘဲပေါ့နော်”ဟုပြောရင်းရေ၀တီနှင့်ဗေဒါတို့တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး ချစ်ကြည်နူးနေကြသည့်မြင်ကွင်းကား တန်ဆောင်တိုင်အလှကို တန်ဆာဆင်ပေးနေသည့်အလား ရှိလေတော့၏ ။
(တောင်းပန်ခြင်း)ဤတန်ဆောင်တိုင်ဖူးစာ စင်တင်ပြဇာတ်အား ဗီဒီယိုဖြင့် မှတ်တမ်းတင်ထားသော်လည်း
အခွေပျောက်ဆုံးသွားသဖြင့် ဗီဒီယိုဖိုင်အဖြစ် မတင်ဆက်နိုင်တာကို ခွင့်လွှတ်ပေးဘို့ တောင်းပန်ပါတယ်
ပို့စ်တင်သူ- ဆန်းသစ်အောင် ===အချိန် 11/23/20100ဦးက ဒီလိုမြင်တယ်
အရိုင်းကောင်များ၏ ဘ၀နိဂုံး(4-11-2010- ညအမှတ်တရ)
ပို့စ်တင်သူ- ဆန်းသစ်အောင် ===အချိန် 11/04/20100ဦးက ဒီလိုမြင်တယ်
သောက်လက်စ သွေးစိမ်းတွေတောင် မကုန်သေးဘူး
မျက်လုံးက နောက်တခုကို လောဘဇောတက်နေပြီ၊
အမျိုးသားသီချင်းတွေလည်း သုံးမရအောင် မြေမှာခ၊
ငါတို့ ဘ၀ကို တွင်းတူးမြုပ်နှံကြ၊
တိရိစ္ထာန်ထက် ရိုင်းစိုင်းတဲ့ သားရိုင်းတွေ
(သန်း ၆၀ ရင်ထဲမှာ)
ကမ္ဘာမကြေသီချင်းတွေ ဘ၀ဆက်တိုင်း ရှိနေမယ်။ ။
(အသိပေးခြင်း)ရင်ခွင်သစ်မှ ကူးယူဖော်ပြပါကြောင်း ရိုးသားစွာ ၀န်ခံအပ်ပါသည်.ကူးယူခွင့်ပေးတဲ့
ကဗျာဆရာ ကိုဧဏီမင်းကိုလည်း အားလုံးကိုယ်စား ကျေးဂျူးကီဘာတင်ပါတယ်...
ပို့စ်တင်သူ- ဆန်းသစ်အောင် ===အချိန် 11/01/20100ဦးက ဒီလိုမြင်တယ်